केवल एक क्यारी-अनको साथ युरोपका लागि प्याकिंग गर्दै!
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » केवल एक क्यारी-अनको साथ युरोपका लागि प्याकिंग गर्दै!
हरेक यात्रुको सपना हो कि सबै महत्वपूर्ण वस्तुहरू हरेक प्लेन स्टपमा सूटकेस तान्दै बिना नै बोक्नुपर्दछ। युरोपमा कहिलेकाँही अत्यधिक मौसम अवस्था हुन्छ, तर तपाईंले साधारण यात्राको लागि आफ्नो पूरै वार्डरोब प्याक गर्नुपर्दैन।
एक विदेश यात्रा को लागी एक पागल विचार जस्तै लाग्न सक्छ, तर यो सम्भव छ। यो केवल केहि स्मार्ट निर्णय लिन्छ, एक झोलामा सम्पूर्ण यात्राको लागि प्याक गर्न - र हामी तपाईंलाई कसरी देखाउन चाहान्छौं।
तथ्यहरु संग शान्ति बनाउनुहोस्
कुनै पनि कुरा भन्दा पहिले तपाईले सहमति जनाउनु पर्छ कि तपाईले कल्पना गर्नु भएको हरेक कपडा आवश्यक छैन। यस बाहेक धेरै यात्रीहरु अधिक प्याकिंग को अन्त जब हरेक मनपर्ने पोशाक मा फिट गर्न को लागी समाप्त हुन्छ।
यसको सट्टामा, यसलाई बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण दिनुहोस्, र ती अवसरहरू राम्रो र धेरै अवसरहरूको लागि उपयुक्त देखिन्छन्।
साथै, तपाईंलाई तपाईंको सबै क्यामेरा गियर र सम्पादन उपकरणको आवश्यक पर्दैन, जबसम्म तपाईं फोटोशूट यात्रामा हुनुहुन्न। केवल सम्भावित कम से कम स्थान ओगट्न मानक उपकरणहरू प्याक गर्नुहोस्। निस्सन्देह, तपाईंले आफ्नो मनपर्ने शरीर क्रीम र शैम्पूहरू फेला पार्नुहुनेछ धेरै सुपरमार्केटहरू र विदेशमा टूरिस्ट पसलहरूमा। केवल आवश्यकहरू बोक्नुहोस् र यदि तपाईं औषधीको अधीनमा हुनुहुन्छ भने औषधी सम्झनुहोस्।
तपाईले आफ्नो यात्राबाट पनि धेरै प्राप्त गर्नुहुनेछ सामानहरू किनमेल सेवाहरू कहिले प्रयोग गर्ने भनेर जानेर। आफैलाई सबै ह्यान्डल गर्न र एयरलाइन्समा अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुको सट्टा, लग डिलिभरी कम्पनीहरूले बजेट-मैत्री मूल्यमा सबै थप सामानको हेरचाह गर्छन्।
एयरलाइन्स अझ सख्त हुँदै गइरहेको छ नि: शुल्क सामान आकार, तर मानक सीमा अझै पनि एक पूरा यात्रा को प्याक फिट गर्न पर्याप्त छ। तपाइँ समतल सतहमा बोक्न चाहानु हुने सबै वस्तुहरू फैलाएर सुरू गर्नुहोस्, र बिस्तारै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई बिस्तारै हटाउनुहोस्।
अधिकतम १० केजीमा फिट हुने ब्याग साइज छनौट गर्नुहोस् - उत्तम रूपमा, एउटा जुन K केजी लगेजमा फिट हुन्छ। प्याकिंग प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईले झोला धेरै ज्यादा कम्प्रेस गर्नुपर्‍यो भने केहि थप वस्तुहरू हटाउनुहोस्। प्रक्रियाहरू दोहोर्याउनुहोस् जब सम्म चीजहरू फिट हुँदैनन्। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईंको दोस्रो यात्रा पछि, तपाईंलाई कसरी छिटो प्याक गर्ने बारे थाहा हुन्छ।
भारी जैकेटको सट्टा तहहरू प्याक गर्नुहोस्। यो शीर्ष लेयर प्लस केही हल्का स्वेटरहरूको लागि रेनकोट हुन सक्छ।
कपासको सट्टा पसीना-शोषक (स्पोर्टी) सामग्रीहरू बोक्नुहोस्। तिनीहरू सफा गर्न, सुक्खा बनाउन पनि सजिलो छ, र इस्त्रीको आवश्यक पर्दैन।
यदि सम्भव भएमा जीन्स ट्राउजरबाट बच्नुहोस्।
रोलि or वा फोल्डिंग?
यो प्रश्न दुबै अन्तरिक्षमा बचतको रूपमा छलफल गरिएको छ। यद्यपि रोलि pre गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि यसले धेरै रि .्क गर्नबाट बचाउँछ। वैकल्पिक रूपमा। तपाइँ रिink्कलि to रोक्न फोल्डिंग बोर्डहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अनपेकिंग बिना फरक कपडा हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्कोतर्फ, फोल्डिंगले तपाईको झोला सफासँग मिलाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।
प्याकिंग क्युब्सको उपयोग कपडालाई कम्प्रेस गर्न केहि खाली ठाउँ छोड्नुहोस् जस्तै अन्य औषधि र तेलहरूको लागि। बाँकी कपडाबाट अलग गर्न तपाईं जाल झोलामा साना लुगा प्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
किन न्यूनतम प्याक गर्नुहोस्
कम सामानको अर्थ यात्रामा रमाईलो हुन्छ। हल्का झोलाले तपाई सामान र क्षति हराउने चिन्ताबाट छुटकारा दिन्छ। यसले तपाईंलाई सजिलै सार्न पनि अनुमति दिन्छ। एउटा सानो झोला पनि प्राय जसो एयरलाइन्समा नि: शुल्क स्वीकार गरिन्छ।
सजीलो आन्दोलनको मतलब तपाईले चारैतिर घुम्ने समय बचाउनु हुन्छ। राम्रो नियन्त्रण संग, तपाईं शायद असहाय जस्तो लाग्न सक्छ विपत्ति मा पछाडि जोखिम हुनेछ। यसले तपाईं आइपुगेको वा बाहिर निस्किरहेको, अपराधीहरू द्वारा सम्भावित लक्षित कम गर्ने तथ्यलाई पनि लुकाउँछ।
तपाईंको लगेज परीक्षण गर्नुहोस्
मानौं तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुभयो। तपाईंको झोला वरिपरि बोक्नुहोस्। यो मूर्ख देख्न सक्छ तर यसले वास्तविक यात्रा अगाडि केहि जोखिम पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। आफ्नो सामानको आराम परीक्षण गर्न वरिपरि हिंड्नुहोस्।
तपाईंको इलाकाको वरिपरि छोटो यात्रा गर्नुहोस्। यदि तपाईंले अझै बल्क कम गर्न आवश्यक छ तर अनावश्यक उन्मूलन समाप्त गर्नुभयो भने लग डेलिभरीलाई विचार गर्नुहोस्।
हस्टल बिना थोक
यदि तपाईं लामो समयावधिको लागि योजना बनाउनुहुन्छ, वा हुनसक्छ तपाईं आफ्नो सबै मनपर्ने पोशाकहरू यात्रा गर्न को लागी गर्न चाहनुहुन्छ भने, विचार गर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सामान वितरण। एक विश्वसनीय सामान ढुवानी कम्पनी छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको घर वा कार्यालयबाट तपाईंको सामान स collect्कलन गर्न सक्दछ र यसलाई यूरोपमा तपाईंको आवासमा डेलिभर गर्दछ।
यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय लगेज डेलिभरी कम्पनीहरूले एयरलाइन्सको साथ अतिरिक्त सामान जाँच गर्दा भन्दा बढी किफायती मूल्यहरू प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं मानसिक शान्तिको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको सामान प्रशिक्षित पेशेवरहरू द्वारा व्यवहार गरिएको छ, जसले क्षतिको लागि जिम्मेवारी लिन्छन्। कुरियर सेवाहरू समयनिष्ठ छन् र कुनै अपरिहार्य ढिलाइहरूको मामलामा तपाईंलाई क्रेडिट दिन्छ। यो प्रायः यस्तो हुँदैन कि तपाईले ढिलाइहरू अनुभव गर्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईंले तपाईंको वास्तविक यात्रा मिति भन्दा पहिले तपाईंको सामान ढुवानी गर्न सक्नुहुन्छ।
युरोप भरको यात्रा आधारभूत यात्रा ह्याकहरूको साथ व्यक्तिहरूका लागि एक परिपूर्ण अनुभव हो। तपाइँको गृहकार्य गर्नुहोस्, तपाइँ तपाइँको निपटान मा धेरै बचत अवसरहरु द्वारा चकित हुनेछ। सामान ओगटेको साथ, तपाईं आवासको प्रबन्धहरू गर्न अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। युरोपले फेन्सी होटेल, टुरिस्ट रिसोर्ट, एयरबएनबी र अधिकबाट बिभिन्न विकल्प प्रदान गर्दछ। यो सबै तपाइँको बजेटमा निर्भर गर्दछ।
पर्यटन मार्केटिंग र सुरक्षा आवश्यकताहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै
घरेलु पर्यटन निरन्तर जारी रहन्छ ...